QupZilla, ilay mpitety tranonkala miandry anao. | Avy amin'ny Linux
QupZilla, ilay mpitety tranonkala miandry anao.
Leo | | fampiharana, GNU / Linux
Mijery lahatsoratra vao haingana momba Konqueror Tadidiko fa efa ela aho no te hanoratra momba ny mpikaroka Internet izay nanaitra ahy.
Fotoana kely lasa izay dia nametraka tao amin'ny iray amin'ireo fizarako aho Chakra miaraka amin'ny lelafo KDE.
Fa hitako izany Renkonq somary niadana kely raha nitety tranonkala (Mazava ho azy fa nampitahako azy tamin'ny Firefox tao amin'ny Arch aho tamin'ny XFCE fa tsara…). Ny zavatra, tsy nieritreritra ny hametraka aho Konqueror fa efa fantatro izy na Firefox satria ao Chakra dia mila mametraka megabytes fanampiny ianao.
Eny, fizahana ny console a a pacman -Ss (Mihevitra aho fa nametraka "web browser"), sendra aho QupZilla. Ny eritreritro voalohany dia ny karazana fork an'ny Firefox taloha, saingy nanararaotra aho.
Rehefa nosokafako izy dia taitra tamin'ny hafainganam-pandehany, ny hatsarany ary ny zavatra tsara indrindra dia azo ovaina izy io.
Hanasongadiko ny sasantsasany amin'ireo endriny fotsiny aho:
Manana izany Adblock tafiditra.
Un Mpamaky RSS tafiditra koa (tsy misy apetraka amin'ny fanitarana hafahafa).
Azo alamina ka Flash dia ampandehanana amin'ny tsindry (araka ny hita eo amin'ny sary) 😀
Voasoratra ao amin'ny Qt4 izay mahatonga azy ho tsara tarehy ao amin'ny KDE.
Izaho (hevitra manokana miharihary) dia toa marin-toerana kokoa noho i Rekonq.
Araka ny pejy officiel azo ampiasaina ihany koa ho an'ny Windows.
Eny, avy eo manana izay rehetra ananan'ny mpikaroka mpikaroka hafa, saingy haingana, mandany loharano vitsivitsy ary tsy nanana olana taminy aho 😀
Mba hampavitrika ny sarimiaina Flash amin'ny tsindry iray dia atao amin'ny preferences> extensions> plugins WebKit.
Manoro hevitra anao aho mba hanandrana azy, hahafantatra zavatra hafa ary hahazo kely mitovy amin'ilay taloha (Firefox, Chrome / Chromium ary orinasa) indrindra amin'ny KDE.
Betsaka ny safidy ary toa mbola betsaka ny mahita ...
Raha hametraka dia efa fantatrao: "baiko arakaraka ny distro" + qupzilla.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » QupZilla, ilay mpitety tranonkala miandry anao.
Amin'izao fotoana izao dia andramako io (indray mandeha indray) ary gaga aho tamin'ny hafainganam-pandehan'ny mpitety tranonkala. Ankehitriny, toy ny mahazatra dia misy ny "fa" ...
Toa hitako fa olana Webkit io, saingy misy ny hitsin-dàlana fitendry izay tsy mety amiko, ohatra ao amin'ny editor WordPress. Ny Ctrl + Enter to autocomplete .com dia tsy mety amiko ihany koa.
Fotoana vitsy lasa izay dia nakatona tamiko izy io, tsy fantatro ny antony, ary vitsy ny safidiny fanaingoana azy, saingy hey, toy ny tifitra io raha amin'ny resaka fitetezana. Misokatra tsy misy olana ny Facebook, Gmail ary pejy hafa 😀
Hafahafa, nampiasako an-tsokosoko mba hanaovana an'io fidirana io ihany ary 10 izy io, ilay tonian-dahatsoratra WordPress mahay tsara ary tsy nanelingelina ny fananana kiheba maromaro.
Fa hoy aho, tsy nilaza aho hoe tonga lafatra koa 😉
Mbola manitrikitrika aho fa safidy tsara io ary ampiasaiko hatrany amin'ny Chakra (saingy amin'izao fotoana izao dia kamo ny miandry ny hanombohan'ny KDE aho, maneho hevitra avy amin'ny Arch miaraka amin'ny XFCE 🙂)
Tsy dia tiako loatra izany rehefa nanandrana azy elaela aho ary isaky ny mitady mpitety tranonkala vaovao aho dia heveriko fa izany no antony tsy avelako ny firefox: 3 izay tsy misy mandresy lahatra ahy loatra hanova azy, ny tsy fisian'ny fanitarana Ary toa tsy miala amin'ny alpha mandrakizay izy: mametraka ny fanjakana, na dia nahagaga ahy aza ny fampidirany azy, fa ankoatr'izay, heveriko fa tsy hanome azy fotoana hafa 😐
Andao hojerentsika izay mitranga amin'ny Opera, hivadika ho WebKit izy ireo.
Manantena aho fa tsy hihemotra izy ireo.
Hihatsara izany, tsy misy fisalasalana. Malahelo aho mahita ity famantarana ity izay milaza ara-bakiteny hoe "Mampiasà navigateur f *** ianao, mba avadiho ny Chrome." Ny lafy ratsy, ho an'ny ankamaroan'ny KDEeros, dia ny Webkit misy gtk.
Valiny tamin'i Anubis
Ho an'izay misy ny seranana, qwebkit
ampidiro ao amin'ilay mpampiasa izay ampiasain'ny webkit ary tokony hiasa ho anao ny ankamaroan'ny pejy. ohatra Google+
Eny, tsy ahy izany satria tsy mampiasa KDE aho.
Manantena aho fa ny fiovana dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fampisehoana na hahatonga azy mavesatra.
Izany no hadisoan'ny spam Google
Hojerentsika izany, jereo ny fomba fiasan'izy io ao amin'ny Kubuntu. Mahafinaritra hatrany ny manandrana tolo-kevitra fitetezana maimaimpoana hafa.
ny hany zavatra mety malahelo an'ireny mpitety tranonkala tsy fanta-daza ireny dia ny fanitarana ... ohatra, mampiasa lastpass be dia be aho amin'ny hafa
Lastpass? Milamina ve ny manome ny teny miafina amin'ny mpizara?
Manontany aho satria tsy fantatro izy ary mahaliana ahy izy.
Eny, ho an'ny fandriam-pahalemana hanandrana ny loko hehehe maro ny olona hilaza aminao fa tsy tokony hatao izany, te-hieritreritra aho fa izany ary tena manafina ny angon-drakitra ny orinasa ary tsy hanaiky azy ireo.
Ny tombony an'io dia ny fanananao ny tenimiafinao azo antoka amin'ny toerana iray ary amin'ny fametrahana fotsiny ny extension amin'ny chrome / chromium, opera, firefox sns dia hahazo miditra amin'izy ireo ianao.
Raha ny fahitako azy, na dia manana kwallet manana fitondran-tena mitovy aza ny KDE fa eo an-toerana ihany, dia azo ampiharina tokoa raha mitantana kaonty maromaro amin'ny PC samihafa ianao.
ho ahy manokana dia atoroko azy io na dia maro aza no hilaza hoe tsia ary ny hafa kosa eny ... ka ny zavatra tsara indrindra dia ny manandrana mijery izay eritreretinao
Tsy fantatrao ve fa nigadra i Seguro!?
Ny tombony an'ny Lastpass dia ny fampiharana mampiditra ny teny miafina ao amin'ny masininao ary avy eo mandefa azy ireo amin'ny fifandraisana azo antoka amin'ireo mpizara azy. Raha very ny tenimiafinao dia tsy misy fomba hamerenana ny angon-drakitrao, satria voafafa ireo angona mitovy - ao anatin'izany ny teny miafina - tsy misy fomba hidirana amin'ny kaontinao intsony.
Hatramin'ny nahareseko ny fisalasalako voalohany dia hitako fa ny Lastpass dia iray amin'ireo fanitarana / fampiharana / fitaovana fototra amin'ny fiainako an-tserasera: tsy vitan'ny hoe manao fidirana amin'ny tranokala rehetra izay mila mpampiasa voasoratra anarana avy amin'ny masinina sy ny mpitety tranonkala rehetra izay manohana ny fanitarana tsy misy dikany, fa izany koa dia manana bonus fanampiny amin'ny famoronana tenimiafina sarotra ho an'ireo tranonkala izay anoratantsika anarana amin'ny fomba manome ny fiarovana farany sy farany ambony; tsy fantatsika akory ny teny miafina hidirana amin'ilay tranonkala voalaza, izay tsy ilaina koa satria voatahiry ho azy ao amin'ny kaontintsika.
Raha mampiasa net sy be mpampiasa ianao, dia mamporisika anao aho hanandrana ny Lastpass.
Tiako ihany koa i lastpas, manome fotoana 2.x ho an'ny rekonq aho izay nahazo fitoniana ary mampiasa ny poketra tenimiafiko KDE aho.
Mikasika an'i Qupzilla dia misy safidy hafa tena tiako.
Mametraka, na dia tsy ao amin'ny repos Ubuntu aza.
Fitsapana, ny marina dia toa tsara ny manova ny maso mpampiasa dia tena mora, tsy misy plugin na baiko na zavatra ilaina.
Mpiasan'ny mpampiasa fitsapana.
Apetrako tsara ireo sary masina, saingy milaza amiko ny tranonkala fa mampiasa Windows oO aho
Tsy mampino izany ... ary mampatahotra ...
Nanandrana izany aho volana vitsivitsy lasa izay, saingy nanana ny olana aho fa nikatona irery ary raha ny fahitako azy dia tsy io irery no sendra izany.
inryoku dia hoy izy:
mampiasa greasemonkey. Tsy mbola fantatro hoe azo itokisana ireo script GM. misy hevitra ve?
Mamaly an'i inryoku
Qupzilla dia mpizaha tena tsara. Talohan'io dia tena tsy milamina fa ankehitriny nihatsara be.
Manamboatra kinova vaovao amin'ny qt5 They ry zareo
Mazava ho azy fa maivana ilay browser ary raha ny voalazan'ity lahatsoratra ity dia haingana. Fa rehefa te hanokatra ny tantara aho, handamina tsoratadidy na hanokatra ny safidiny, dia raikitra izany ary mila manidy azy an-keriny aho, ka tsy mandeha ho ahy.
Te hanandrana aho, ho hitantsika izay hitranga
Aorian'ny fitsapana tontolo andro an'i Qupzilla dia manana famaranana aho:
- Hafainganana noho ny Firefox izy io, na dia misy aza ny zavatra tsy hita .. ary tiako izany.
- Saingy mandany bebe kokoa .. miaraka amin'i Qupzilla sy tabilao 3 misokatra dia nahatratra 1.5 Gb RAM aho, ary tamin'ny Firefox dia tsy nihoatra ny 800MB mihoatra ny 4 aho ..
Azo antoka fa zavatra maro no mbola tsy hita. fa miaro tena be izy. Ary tsy haiko ny antony, fa na dia voafetra ihany aza ny QupZilla, Midori ary ny hafa, dia maro amintsika no maniry azy ireo 😀
Hitako aza fa naneho hevitra tamin'i elink izy ireo !!!! 0.0
Hmm, faly be aho rehefa nilaza ianao fa nieritreritra fa fork an'ny Firefox io ary nahita fa nifarana tamin'ny Zilla ny anarany, saika nihomehy tamim-pientanam-po aho ... saingy diso fanantenana avy hatrany aho rehefa tonga teo amin'ilay ampahany milaza fa mampiasa webkit.
Mieritreritra aho fa hifikitra amin'ny Firefox tsara nataoko.
Tsy misy fanafintohinana, saingy hitako fa ny Webkit dia miasa tsara kokoa amin'ny HTML5 noho ny firefox. Samy mampiasa aho.
Benpaza dia hoy izy:
Salama Leo, miala tsiny amin'ny fanelingelenana, fantatrao fa te hanontany anao aho: tsara kokoa ny ArchLinux amin'ny KDE na XFCE ary nahoana? Fantatro fa tsy ny fanontaniana no misy fa manantena aho fa afaka manisy soa ahy hamaly azy ianao. Misaotra anao.
Valiny tamin'i BenPaz
Jereo fa tsara kokoa ny manandrana. Avy amin'ny traikefa XFCE sy LXDE miasa tena tsara ary milamina tsara ao amin'ny Arch.
Fa raha hampiasa KDE ianao, dia manoro hevitra anao aho hampiasa Chakra, izay mifototra amin'ny Arch fa mipetraka amin'ny KDE sy amd64 fotsiny ary miseho betsaka izany.
Fa manitrikitrika aho fa hevitra fotsiny io fa ny tsara indrindra dia ny manandrana mamintina ny fehin-kevitrao manokana.
Tena tsara! Ahoana no hametrahako azy amin'ny teny espaniola?
QupZilla dia mpizaha tena tsara, raha ny marina dia ampiasaiko izany rehefa mametraka haino aman-jery sarotra amin'ny pejy sasany ny chrome na ny firefox, toy ireo fandoavam-bola amin'ny Internet.
Raha manana haavon'ny fivoarana sy fandraisana anjara toa ny fantatry ny QupZilla dia ho hafa ny tantara. Tena mendrika hodinihina izany.
Nalaim-panahy aho ary nanandrana azy
Ny marina dia tiako izy io saingy manantona betsaka, isaky ny roa isaky ny telo dia mihidy izy.
Ampiasaiko amin'ny Mint 13 miaraka amin'ny Kde 4.10 izany, tsy fantatro raha misy ifandraisany amin'izany ...
Fa tena tsara sy maivana
Izy ireo ve no hevitro sa tsy manohana HTML5? Notsapaiko tamina tetik'asa manokana novolavolako ary tsy nety tamiko ilay sazy ilaina 🙁
Raha tsy fanitarana roa dia ampiasaiko izany.
Lastpass sy Xmarks (toy ny hafa etsy ambony)
Polonium + mpitondra tsy mahazo aina = mpitondra voan'ny homamiadana dia hoy izy:
Tena mailaka izy, eny, fa farafaharatsiny ho ahy, rehefa misokatra ny takelaka (25 na 30) dia mikatona matetika aho. Heveriko fa mila manatsara betsaka ny olan'ny fitoniana, saingy mazava ho azy fa eo amin'ny làlana tsara izy ireo, ho ahy io no fitetezako faharoa aorian'ny Firefox; Arora sy Rekonq dia miasa ratsy kokoa ho ahy, ary i Konqueror dia tsara kokoa raha tsy hiteny… (na dia tsy maintsy ekena aza fa nihatsara be ny fanontana KDE 4.10). Qupzilla mbola tsy nohavaozina nanomboka ny volana septambra, manantena isika fa tsy nandao ilay tetik'asa izy ireo, satria io no hany fanantenana ho an'ny mpitety tranonkala mendrika natao tao QT.
Mamaly ireo Polonium + mpitarika tsy mahazo aina = mpitarika voan'ny homamiadana
Ho an'ireo izay maniry izany amin'ny Ubuntu na flia. dia tratra amin'ny alàlan'ny launchpad:
Ao anatiny aho ary tena tiako ...
Famafana ireo mpampiasa ao amin'ny FromLinux
Vahaolana Chfn: nolavina ny fahazoan-dàlana